Qaboojinta dabiiciga ah | December 2019
Ugu Weyn Ee Qaboojinta dabiiciga ah
Helitaanka digaagga dhalinyarada ah ee ku jira isugeynta dabiiciga ah ee ukunta
Digaagga koraya iyo taranta ma aha oo kaliya hawl fudud, laakiin sidoo kale faa'iido leh. Waxaa intaa dheer, isagoo mar kaliya ku iibsaday digaagga suuqa, mar dambe uma baahnid inaad lacag ku qaadato si aad u hesho jiil cusub oo digaag ah. Ka dib oo dhan, run ahaantii, sababta ay dhibaato dheeraad ah, haddii badi digaagga ayaa si fiican u horumariyey dareenka iyo haynta caruurtooda.
Sida loo xiro juice karooto xilliga qaboobaha
Noocyada doofaarka iyo astaamaha
Kala duwan oo tayo wanaagsan oo yaanyo ah ee koraya ee lagu koriyo - "Icicle pink"
Muuqaalka: Qalabka waxtarka leh iyo ka horjeeda
Maxay sababta ay bakayle u diidaan, cunaan oo ay cantoobaan
Digaagga, sida shimbiraha kale, ayaa sidoo kale jiran. Cudurada noocyada neefta ee shimbiraha ee shimbiraha ayaa ah kuwa ugu khatarsan, tan iyo xataa hal qof jirran ayaa kufsi kara qof kasta muddo gaaban. Inta badan ka yimaad cudurada neefsashada ee digaagga ayaa la xanuunsanaya mycoplasmosis. Tixgeli waxa jiraya, iyo sida loola macaamilo. Read More
Sida loo abuuro oo u koro Magnolia Sulanzha on your site
All oo ku saabsan dabocase saliid - sharaxaad iyo sawir khudradeed, qaababka beerashada iyo isticmaalka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qaboojinta dabiiciga ah 2019